ट्रम्पले ‘असफल’ भनेका मिडियाको ‘नयाँ जिवन’ - Vision Nepal TV
ट्रम्पले ‘असफल’ भनेका मिडियाको ‘नयाँ जिवन’
Published: February 23, 2017 | 3:34 am | बिहिबार, फाल्गुन १२, २०७३ | ५४२० पटक पढिएको
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विट गर्दै दि न्यु योर्क टाइम्सलाई ‘असफल’ भनेका थिए । तर उनको राष्ट्रपतिकालका कारण यो पत्रिका लगायत अन्य पत्रिकाहरुले अर्को नयाँ जीवन प्राप्त गरेका छन् ।
न्यु योर्क टाइम्स, दि वाशिङटन पोस्ट तथा वाल स्ट्रिट जर्नल जस्ता अखबारहरूको बिक्री तथा पेज भ्युमा बढोत्तरी भएको छ । यति मात्र हैन अन्य च्यानलहरुको लगातार भ्युअरसिप घटिरहेको वेला सीएनएन र फक्स न्युज जस्ता च्यानलको भ्युअरसिप बढिरहेको छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनाव पछाडि दि न्यु योर्क टाइम्स कम्पनीको शेयर मुल्य पनि ४२ प्रतिशतले बढेको छ । यसले विशाल गोल्मान साक्सलाई पनि माथ दिएको छ ।
किन बढ्यो त ? अकल्पनीय राजनीतिक घटनाक्रमले अमेरिकी आँखाहरु पत्रिका पेजहरुमा तथा टीभी स्क्रिनमा टाँसिन पुगेका छन् ।
चुनावपछिको परिवर्तनको गतिले ट्रम्पका समर्थक तथा विरोधीहरुलाई एकै जस्तै गरि घटनाक्रमहरूसँगै बस्न बाध्य पारेको छ ।
धेरैले त्यसका लागि ट्विटर प्रयोग गरिरहेका छन् । तर अन्य धेरै मानिसहरुले स्थापित समूहले प्रदान गर्ने विश्लेषण चाहेको देखिन्छ । ट्रम्पले केही मिडिया आउटलेटहरूलाई प्रहार गर्ने कामले अवज्ञाको रुपमा केही क्रेताहरु तथा दर्शकलाई मिडियाप्रति प्रोत्साहन गरेको छ ।
ट्रम्पको आक्रमणविरुद्धको टकरावले सबैभन्दा बढी न्यु योर्क टाइम्समार्फत मुखरित भएको छ । यसले गतबर्ष ५ लाख भन्दा बढी अनलाइन सब्सक्राइबर थप्न सफल भयो । गतवर्षको चौथो त्रैमासिकमा मात्र खाषगरि चुनावपछि यसले दुई लाख ७६ हजार थप्न सफल भयो ।
अहिले योसँग १७ लाख डिजिटल सब्सक्राइबर मात्र गरि जम्मा ३ मिलियन (३० लाख) सब्सक्राइबर छन् । एक नाप मापन अनुसार यसको साइटमा ट्राफिक दर एक बर्ष अघि भन्दा झण्डै तेस्रो उच्चतम छ । यसमा कहिल्यै नटुंगिने ट्रम्पको विवादास्पद समाचारको प्रवाहले सहयोग गरेको छ ।
हालैका महिनामा आर्कषक स्कुप समाचार पस्कँदै आएको वासिङटन पोस्टले सब्सक्राइबरको संख्या सार्वजानिक नगरे पनि फेब्रुअरी १४ मा क्यालिफोर्नियामा एक सम्मेलनमा बोल्दै यसका सम्पादक मार्टी ब्यारोनले सब्सक्राइबरको संख्या तीब्र दरमा बढिरहेको बताएका थिए । रुपर्ट मर्डोकको वाल स्ट्रिट जर्नलको डिजिटल सब्सक्राइबर अघिल्लो बर्षको अन्त्यमा ११ लाख बढेको र सब्सक्राइबर यो बर्ष अघिल्लो बर्षको भन्दा जम्मा २ लाख ५० हजार बढेको छ ।
एक वा अर्को तरिकाबाट मानिसहरु कसैगरि पनि ट्रम्पबाट अघाउँदैनन । रिसर्च फर्म निल्सनले जनाएअनुसार सबै च्यानलहरुमध्ये मुख्य तीन केवल नेटवर्कहरु फक्स न्युज च्यानल, एमएसएनबीसी र सीएनएनले सन् २०१७ कै सबैभन्दा धेरै भ्युअरसिप बृद्धिको लाभ लिन सफल भएको छन् । हरेकको ४० प्रतिशत भन्दा बढी भ्युअरसिप यो बर्षको ६ हप्तामा फेब्रुअरी १२ सम्ममा बृद्धि भएको थियो ।
यसमा फक्स न्युज च्यालन सबैभन्दा बढी हेरिने च्यानल भएको छ । यसमा जनवरी २ सम्म प्राइम टाइममा औषत ३१ लाख भ्युअर थिए । त्यतिबेला ट्रम्पप्रति नरम धारणाका कारण तथा उनका सर्मथकहरुले यसलाई गन्तब्य बनाएका थिए ।
परम्परागत मिडियाको यो बृद्धि एक चुनौतीपूर्ण समयमा आएको छ । टीभी अन्र्तगत सबै केबल च्यानलहरुको भ्युअरसिप घट्दो छ । जसले बिज्ञापन बिक्रीमा दवाब सिर्जन गरिरहेको छ । पत्रपत्रिकाको अवस्था झन दयनिय छ । सन् २००० यता उत्तर अमेरिकाको बजार संरचनागत रुपमा अधोगतिमा छ र यसले सन् २०१५ सम्ममा तीस बिलियन डलर गुमाइसकेको छ जुन ६० प्रतिशत ह्रास हो । गत बर्ष मुख्य पत्रिकाहरुको प्रिन्ट विज्ञापन लगातार ह्वात्तै घट्ने क्रम रह्यो । तर डिजिटल बिज्ञापन भन्दा प्रिन्ट अझै बिज्ञापनका लागि आर्कषण नै मानिन्छ । न्यु योर्क टाइम्सले प्रिन्ट बिज्ञापनमा १६ प्रतिशत गिरावट भोग्यो । यसैका कारण प्राय सबै अमेरिकी पत्रिकाहरुले कर्मचारी कटौतिमा गएका थिए । २०१६ को मध्यावधिमा वाल स्ट्रिट जर्नले २१ प्रतिशत बिज्ञापन रेभिन्युमा ह्रास भोगेको थियो । जसले गर्दा धेरै खर्च कटौतीको कदम चाल्नु परेको थियो ।
तर अहिलेको ट्रम्प नेतृत्वको मिडिया पुनःउत्थान ब्यंग्यात्मक छ । किनभने पत्रपत्रिकाको गिरावटले ट्रम्पलाई नै फाइदा गथ्र्यो । मानिसहरु बढ्दो रुपमा सुचना स्रोतहरु इन्टरनेटमा खाषगरि ट्विटर तथा फेसबुकमा निशुल्क रुपमा हेर्न खोज्छन जुन कम विश्वसनिय सुचनाहरु हुन्छन् जसमा ट्रम्प एक पात्र हुने गर्दछन ।
तर यो ट्रम्पको टकराब कति लामो समय सम्म जान्छ त ? गत महिना न्यु योर्क टाइम्सका कार्यकारी मार्क थम्सनले बिश्लेषणकर्तालाई यो अवस्था ट्रम्प प्रशासन रहुन्जेल कायम हुने बताएका थिए । किनभने त्यतिवेलासम्म उनले समाचार र विवाद सिर्जना गरिरहनेछन् । एक पत्रकारको रुपमा उनले यो अवस्था धेरै महिना वा बर्षौंसम्म रहने आशंका ब्यक्त गरेका थिए । र मिडिया मुगलहरु यस्तै अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
इकोनोमिस्ट विशेष रिपोर्टबाट
५४२१ Total Views ३ Views Today
← नयाँ लाइसेन्स नबन्ने सम्भावना: सकिदै छ स्मार्ट लाइसेन्स
ट्यांकरचालकको धम्कीले पम्पमा अनावश्यक लाइन : निगम निरीह →
एक नेपाली फेरी नासाका वैज्ञानिक बनेपछि नयाँ चमत्कार